Harona anana - tsara sy ratsy
Ao amin'ny tontolo maoderina, ny tsiranom-bary dia very ny toerany, ny fahaverezany amin'ny buckwheat sy ny vary. Raha tsaroanao, ho an'ny razambentsanay io lovia io dia laharana faha-1 ary nantsoina hoe papango ho "mahery fo". Alao ny vary avy amin'ny vary orza, izay azo amboarina amin'ny famoahana, ary tsy manify, toy ny perla fararano. Izany no antony mahatonga betsaka vitamins, macro sy microcells ary fibre tavela ao. Ireo rehetra ireo dia ilaina amin'ny fiainana ara-dalàna.
Ny tombony sy ny fanimbana ny vary orza
Azonao atao ny mandrehitra ny vombony amin'ny rano sy amin'ny ronono, ary koa ampiana solika sy zavatra hafa. Ireo izay te ho very fananana sy ho an'ireo tia ny sakafo ara-dalàna dia hanatona ny safidy voalohany, satria 100 g ny masira toy izany dia ahitana 76 kcal. Harona mahavoky ny orzavatra gera:
Noho ny fisian'ny fibre dia voapoizin'ny toaka sy ny poizina ny tsinay, izay manatsara ny rafi-pandaminana sy ny rafi-pandaminana. Ny vovo-tsakafo dia manampy amin'ny fanamafisana kokoa ny zavatra hafa ilaina. Ny dokotera dia manoro ny sereal amin'ny olona manana olana amin'ny vavony sy ny tsinay.
Manome anao ny fampihenana ny haavon'ny kôlesterôla, izay tena manan-danja indrindra amin'ny fisian'ny aretina ao amin'ny rafi-panafody.
Raha jerena ny firafitry ny vary maitso, dia azo lazaina fa misy fiantraikany amin'ny siramamy ao amin'ny ra izany. Izany no antony itoriana ny mitondra ny sakafo ho an'ny olona voan'ny diabeta.
Ny fanandramana sasany dia naneho fa ny vary orza dia afaka manohitra ny fisehoan-javatra mahakasika ny alikaola.
Ny vokatra azo avy amin'ny lafarinina avy amin'ny orzole dia noho ny herin'ny dibera sy ny fiarovan-tena. Miaraka amin'izany, ny dokotera dia manoro hevitra ny mihinana azy amin'ny arthritis, ary koa amin'ny aretina isan-karazany amin'ny aty sy ny voa.
Ny fiaraha-mikirakira manankarena dia misy fiantraikany amin'ny asan'ny rafitra ngeza, izay manampy amin'ny fanafoanana ny tsy fahitan-tory sy ny fahatsapana ratsy.
Lisitry ny karazan-tsakafo ara-pahasalamana ihany ity, saingy ny fiheverana fa azo atao ny manamarina fa ny fanatrehan'ny menaka varimbazaha ao amin'ny sakafo dia voamarina tanteraka.
Tahaka ny vokatra hafa rehetra, ny haran-davenona dia mety hanimba ny vatana. Ny zavatra voalohany tokony hodinihina dia ny fisian'ny tsy fandeferana ny vokatra. Tsy azo ampiasaina izany ho an'ireo olona manana enti-misotro glycine. Ny vehivavy tsy bevohoka no tsy manaiky ny fihinanana sakafo, satria ny fanafody dia misy zavatra azo atao hahaterahana aloha. Raha te-handevona ny lalan-kazo ianao, ohatra, mba hahazoana lanjany, dia tandremo tsara ny dokotera.
Sakafo ho an'ny vary orza
Ireo mpandrindra an'ity rafi-pahefana ity dia manambara fa afaka mahalany hatramin'ny efatra fanampiny ny herinandro. Mila mihinan-kanina fotsiny ianao, voatso-ronono tsy misy siramamy, menaka, sira ary fanampiny. Ho an'ny fanovana tsiro, afaka manampy trondro kely na voankazo maina ianao .
Ny fitsipiky ny sakafo haranina:
Alohan'ny sakafo tsirairay dia tsy maintsy misotro 1 tbsp. rano mafana. Ankoatra izany, isan'andro dia mila misotro rano farafahakeliny 1.5 litatra ianao.
Avy amin'ny sakafo dia ilaina ny manilika ny proteinina, mofo, mamy ary maingoka-rovitra afa-tsy kefir.
Ny sakafo isan'andro dia tokony ahitana voankazo, legioma, sokatra, dite sy kafe, nefa tsy misy siramamy.
Ny sakafo dia azo atao araka ny safidinao manokana. Ohatra, mety izao izany:
Ny sakafo maraina : ampahany amin'ny papango, banana, 1 tbsp. kefir.
Sakafo : Tapakazo vita amin'ny menaka, sira amin'ny sakafo, salady legioma.
Afangaro amin'ny faran'ny herinandro : citrus na poma.
Dinner : ampahany mofo sy 1 tbsp. kefir.
Aorian'ny faran'ny sakafo, dia alefa ao anaty sakafo ny papango ary misakafo imbetsaka isan-kerinandro amin'ny sakafo maraina. Amin'izay fotoana izay, tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana sy fampiharana. Noho izany, ny lanjany dia hijanona tsy tapaka.
Ny voankazo pomelo - tsara sy ratsy
Inona avy ny vokatra azo avy amin'ny potasy?
Sambo - tombony sy fahasimbana amin'ny fahasalamana
5 vokatra mampidi-doza indrindra
Inona no ilaina amin'ny mofo?
Tondra-dronono - tsara sy ratsy
Sakay lena - tombony sy ratsy
Fanamboarana simika amin'ny paoma
Goji berries - votoaty kalorie
Biby voa - tsara sy ratsy
Inona avy ny vitaminina voatoto amin'ny persimmon?
Tavoahangy tantely - tsara sy ratsy
Tafio-drongony tsara sy ratsy
Salady miaraka amin'ny alika sy vary
Famonoana tantely - famantarana sy fomban-drazana amin'izao andro izao
Ny rafitry ny kôkômbinina
Ny tsara dia tsara sy ratsy ny ovy
Ny rehetra mba ho marin-toetra: kintana 65 sary tsy misy loko makia!
Portiogaly - isaky ny volana
Ny "dart" nalefan'i Melissa McCarthy nandritra ny fampisehoana ny "Ghostbusters"
Akanjo teny amin'ny lalantsara
Grand Opera any Parisy
Ny famonoana vehivavy - ny antony sy ny fitsaboana
Ahoana ny fisafidianana akanjo?
Tavoahangy eo amin'ny balcony
Mialà any Tallinn
Miantsena amin'ny toerana
Hazo vokarina ho an'ny voankazo
Azo atao ve ny mitondra tantanana amin'ny fampinonoana?
Kakazo - kaloria
Inona ny icono mivavaka mba hahita asa tsara?
Phlebologist - iza ary, ary oviana ny dokotera?